:: My Little World ::: March 2009
တစ်သက်လုံး သီချင်းတွေ နားထောင်လာ ခဲ့တယ်။ တကယ်ဆို နားထောင်ဖူးတဲ့ သီချင်းတွေက အများကြီး၊ ကြိုက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေကလည်း အများကြီး။ တချို့သီချင်းတွေကိုဆို နားမထောင်တာ ကြာတော့ မေ့နေပြီ။ တစ်နေရာရာမှ ပြန်ကြားလိုက်မှသာ ဒီသီချင်းလေး ဟိုးအရင်က ဘယ်လို နားထောင်ပြီး၊ ဘယ်လို ကြိုက်ဖူးတာလို့ပြန်ပြီး သတိရတတ် လာတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း အဲဒီလို့ကြုံရတာ များများလာပြီ။
အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်သီချင်းဆို ဘယ်သူဆိုတာမို့ကြိုက်တယ် ဆိုမျိုးထက်စာရင် နားထောင်ရလို့ကိုယ်စိတ်နဲ့တွေ့ တာမျိုးဆို အကုန်ကြိုက်ခဲ့တယ်။ နာမည်တွေကို မှတ်တဲ့ နေရာမှာ အားနည်း၊ ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုပြီး သီးသန့်စုထားတာလည်း မရှိ( မတည်မြဲခြင်းသဘော) ဆိုတော့ တခါတလေ သီချင်းတွေ နားထောင်ချင်ရင် လိုက်ရှာရတာ အတော် ပင်ပန်းတယ်။ ဘာနားထောင်ချင် မှန်းမသိလို့ပင်ပန်းတာ ပိုရပါတယ်။ ခေါင်းစဉ် ဒါမှမဟုတ် ဆိုတဲ့ အဆိုတော် သိမယ်ဆို ရှာလို့ ရနိုင် သေးတယ်။
ခုရက်ပိုင်း သီချင်းဟောင်းတွေကို နားထောင်ဖို့ပိုပြီး အာသီသ ရှိနေတာနဲ့အင်တာနက်ပေါ် လိုက်မွှေကြည့်ရင်း ယူအက်စ် Billboard မှာ ထိပ်ဆုံးနေရာ ရခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေရဲ့ နာမည်တွေကို စုစည်းပေးထားတဲ့ နေရာ တစ်ခုတွေ့ တယ်။ ၁၈၉၁ ကနေ စလို့အခု အချိန် အထိ။ စိတ်ကြိုက် ဖြစ်သွားတယ်။ သီချင်းနာမည်တွေ လိုက်ရှာလိုက်၊ နားထောင်ကြည့်လိုက် လုပ်ဖြစ် နေတယ်။ သီချင်းတွေကို YouTube မှာ လိုက်ရှာ နားထောင် သလို၊ အမ်ပီသရီး ရှာပြီးလည်း နားထောင်ဖြစ်တယ်။
#1 Song in the U.S.A. on Any date in History
According to Billboard Magazine
သီချင်းဟောင်း၊ သီချင်းကောင်းလေးများကို ပြန်လည်ရှာဖွေ နားဆင်ခံစားလိုသူများ အတွက် အသုံးဝင်မယ် ထင်ပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံအတွက် အဲလိုလုပ်ထားတဲ့ ဆိုဒ်များ ရှိမလားဆိုပြီး လိုက်ရှာကြည့်တာတော့ မတွေ့ ဘူး။ အဲဒီဆိုဒ်မှာ ရက်စွဲ အလိုက် လိုက်ရှာကြည့်လို့ ရတဲ့အတွက် စိတ်ဝင်စားတယ်ဆို ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ မှတ်မှတ်သားသား ရှိနေတဲ့နေ့ ရက်တွေမှာ နံပါတ် ၁ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းက ဘာလည်းဆိုပြီး ကြည့်လို့ ရတယ်။
No. 1 Song - The Day You Were Born
အင်တာနက်ပေါ်က တချို့ နေရာလေးတွေမှာ ဒီဆိုဒ်လေး သုံးပြီး ကိုယ်ရဲ့မွေးနေ့ မှာတုန်းက ဘယ်သီချင်းက ထိပ်ဆုံး ရောက်နေတာ၊ သီချင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘယ်လို ဆိုပြီး ပြောနေတာမျိုး တွေ့ မိတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က မွေးနေ့ မေးလို့တိုက်ရိုက်မပြောချင်ရင် သီချင်းလေးပြောပြီး မွေးနေ့ ဘာလည်း ကိုယ့်ဘာသာရှာကြည့်လို့ပြောလို့ ရတယ်။ သီချင်းက #1 US Billboard မှာ ရက်အတန်ကြာ ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ တခြား Hints လေးတွေပါ ထည့်ပေးဖို့ လိုလိမ့်မယ်။
သီချင်း နာမည်ကြည့်ပြီး အမ်ပီသရီး ရှာနားထောင်ချင်တယ်ဆို ဒီဆိုဒ်တွေ သုံးရှာကြည့်လို့ ရတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 3/27/2009 04:06:00 PM 13 comments
Posted by Nay Nay Naing at 3/25/2009 10:48:00 PM4comments
အမေရိကန်သမ္မတ Obama က လာမယ့် ကြာသာပတေးနေ့ မှာ WhiteHouse.gov Website က တစ်ဆင့် Online Town Hall Meeting တစ်ခု ပြုလုပ်မယ်လို့ဖတ်လိုက်ရတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ အတော်လေး ကောင်းတယ်။
Online Town Hall Meeting ဆိုတာ ဘာလဲ။ အွန်လိုင်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့ Informal Public Meet တစ်မျိုးပါ။ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်၊ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုက ဦးဆောင်ပြီး ကျင်းပတယ်။ ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေကို မေးနိုင်တယ် ပြောထားတယ်။ လူတွေက အဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ကိုယ်မေးချင်တဲ့ မေးခွန်တွေကို အွန်လိုင်းကနေ ပို့ ပေးလို့ ရတယ်။ တခြား သူတွေရဲ့ မေးခွန်းတွေကို Vote ပေးလို့ ရတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ မေးတဲ့ မေးခွန်းတိုင်းကို ဖြေပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူကြိုက် အများဆုံး (မေးသူ အများဆုံး) ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေထဲက တချို့ ကို ရွေးချယ်ပြီး ဖြေပေးမှာပါ။ အခု ပြုလုပ်တဲ့Obama ရဲ့ Online Town Hall Meeting မှာ နည်းပညာပိုင်းအရဆို Google Moderator နဲ့App Engineကို သုံးပြီး ပြုလုပ်ထားတယ် သိရတယ်။
White House - Open For Questions
WhiteHouse Website မှာ Your Questions on the Economy လို့ ပြောထားတော့ Obama ကို စီးပွါးရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးလို့ ရတယ်ပေါ့။ မေးခွန်းတွေကို Topic 11 တွေခွဲပြီး ပေးထားတယ်။ မေးခွန်း မေးဖို့ယူဆာကောင့် လုပ်ဖို့ လိုတယ်။ ပြီးရင် ကိုယ်မေးချင်တာတွေ ပို့ လို့ ရပြီ၊ သူများမေးတာတွေ Vote ပေးလို့ ရပြီ။ မေးခွန်းတွေကို ပေးပို့ တဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်ပြီး ကိုယ်မေးချင်တာကို မေးထားတဲ့ Video မျိုး ပို့ ပေးတာမျိုးကို အားပေးပါတယ် ပြောထားပေမယ် စာနဲ့ဒီတိုင်း မေးလည်းရတယ်လို့ လည်း ပြောထားပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ဘာမေးရမယ်မှန်း မသိတောင် သူများ မေးထားတာတွေထဲက ကြိုက်တာတွေ့ ရင် Vote လုပ်လိုက်ပေါ့။ အခု လက်ရှိ လူ ၆၇၀၀ ကျော်က မေးခွန်း ၆၇၀၀ ကျော်မေးထားပြီး မဲအရေအတွက် ၂ သိန်း ၂ သောင်းကျော် ရနေတယ်လို့ ပြနေတယ်။
Obama က သူ့ ကို မေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေထဲက ဘယ်မေးခွန်းတွေကို ဖြေမှာလဲ၊ ဘယ်လို ဖြေမှာလဲ သိချင်တယ်ဆို ကြာသာပတေးနေ့ မှာ အဲဒီနေရာမှာပဲ သွားပြန်ကြည့် နားထောင် နိုင်တယ်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 3/25/2009 01:40:00 PM 1 comments
တစ်စုံတစ်ခုကို ပြန်မရနိုင်မှန်းသိလိုက်ရတဲ့ အခါ...
စိတ်ပေါ့ပါးသွားသလိုပဲ.. ပြီးတော့ ရယ်မောမိတယ်..
အဲလိုတွေဖြစ်မယ် လုံးဝ မထင်ထားခဲ့ဘူး..
တန်ဖိုးမထားလို့ လားတဲ့ ..မဟုတ်ပါဘူး...
အရေးမကြီးလို့ လားတဲ့.. ဒါလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး...
ဘာမှ မခံစားရလို့ လားမေးမယ်ဆို.. စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုရှိပါတယ်..
ကြိုးစားကြည့်အုံးမလားတဲ့.. ထားလိုက်လို့ ပဲ ပြောမိတယ်..
အစားထိုးရမယ် ထင်လို့ လားမေးပြန်တယ်... အလုံးစုံတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး..
အသေးအဖွဲ အရေးမပါတဲ့ အရာတစ်ခုမှ မဟုတ်တာ...
Posted by Nay Nay Naing at 3/24/2009 10:16:00 AM5comments
မနေ့ က ဒါတွေ ရတယ်..
မောင်ငယ် တစ်ယောက် ယူလာပေးတာ။ ကျေးဇူး အထူး။ ဘာမှာချင်လဲ၊ ဘာစားချင်လဲ မေးလို့အာလူးကြော်နဲ့မရမ်းသီး စားချင်တယ် ဆိုပြီးမှာ လိုက်တယ်။ နေမကောင်းတာတောင် အာလူးကြော် တစ်ထုတ်ဖောက်ပြီး နည်းနည်း စားလိုက်သေးတယ်။ ပြီးမှ ဆေးသောက် လိုက်တယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 3/20/2009 02:39:00 PM4comments
Posted by Nay Nay Naing at 3/19/2009 06:42:00 PM 8 comments
Free Licensed Software/Games Daily !!!
ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတဲ့ License နဲ့ရောင်းတဲ့ Software တွေနဲ့Game တွေကို Free Download လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ Software တစ်ခုရဲ့ Download Link ကို အမြဲတင်ပေးထားပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အချိန် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ယူလို့ရတာ မျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ တစ်နေ့ မှာ Download လုပ်ဖို့Software တစ်ခုပဲ တင်ပေးတယ်။ အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ဒေါင်းလုတ် လုပ်ခွင့် ပေးတယ်။ သတ်မှတ်ချိန် ကျော်သွားရင် တခြားသူစီက Download လုပ်ထားတဲ့ File ရအုံးတောင်မှ Activite လုပ်လို့မရတော့ဘူး။
ပုံမှန်ဆို Software တစ်ခုကို ၂၄ နာရီ ပဲ ဒေါင်းလုတ် လုပ်ခွင့်ပေးတယ်။ တစ်ခါတလေ ဒီထက်ကြာကြာ ပေးတာမျိုး ရှိတယ်။ အဲဒီဆိုဒ်က Software/Game ထုတ်တဲ့သူတွေစီက တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ယူပြီး တင်တာဆိုတော့ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ အချိန်ကြာရှည်မှု့ဟာ သူတို့ တွေအကြား သဘောတူညီမှု့နဲ့ဆိုင်တယ်။ Software တွေအများစုက အသစ်တွေ များတယ်။ ထုတ်တဲ့ကုပ္မဏီတွေကလည်း သူတို့ ပစ္စည်း လူသိအောင် ကြော်ငြာတဲ့ အနေနဲ့ တင်ခွင့်ပေးတာ ထင်တယ်။ Trial Version မဟုတ်ဘူး၊ Limited Version မဟုတ်ဘူး၊ Full Version တွေ ပေးတယ်။ Register လုပ်ပြီး တရားဝင်သုံးလို့ ရတယ်။ စမ်းဖူးသလောက်တော့ အဲဒီမှာတင်တဲ့ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး Activite လုပ်ရတာက လွယ်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ယူလိုက်တဲ့ ဖိုင်တွေမှာ ဘယ်လို Activite လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်ပါပြီးသား။
အကြံပေးချင်တာတစ်ခုက Download လုပ်ပြီး၊ Install မလုပ်ခင်မှာ User Rating တွေကြည့်သင့်တယ်။ သူများတွေရဲ့ Review တွေကို Comments မှာ ဖတ်ကြည့်သင့်တယ်။ ဘာပြဿနာမှ မရှိဘူး၊ ကောင်းတယ် သင့်တော်တယ် ထင်တယ်မှသာ Install လုပ်သုံးကြည့် သင့်တယ်။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ တချို့Package တွေမှာ ထရိုဂျန်တွေ၊ ဘာတွေပါနေတယ်ဆိုတာမျိုး Comments တချို့ မှာ ရေးထားတာ တွေ့ ဖူးလို့ ။
ကျွန်မ ဒီ Site ကို ကို Guitablood စီက တစ်ဆင့် သိပြီး နေ့ စဉ် ကြည့်နေတာ ၁ နှစ်ကျော်လောက် ရှိပြီ။ အဲဒီမှာ တွေ့ မိတဲ့ တချို့Software/Games တွေက အတော်လေး ကောင်းတယ်။ Software တွေ စမ်းတာ စိတ်ဝင်စားသူတွေ အတွက် ဒီလို ဆိုဒ်တွေဟာ အတော်လေး အသုံးဝင်မယ် ထင်မိတဲ့ အတွက် မသိသေးသူတွေ သိသွားအောင် သတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အမြဲ မျက်ခြေမပြတ် ကြည့်နေဖို့ လိုတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုဆိုတော့ ကြိုက်တယ်ဆို Reader နဲ့ထည့်ပြီး ဖတ်မှ အဆင်ပြေတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 3/18/2009 05:30:00 PM7comments
လုပ်စရာရှိတာလေးတွေ လုပ်ရင်း တစ်ဘက်က တစ်ခုခု ရေးမယ် စဉ်းစားတယ်။ ဟိုတို့ တိ ဒီတို့ တိ လုပ်ထားတာလေးတွေ အဆုံးသတ်ရင် ကောင်းမလား။ စမ်းကြည့်တယ်။ မဖြစ်ဘူး။ ဒါနဲ့အစားအသောက် အကြောင်းပဲ ရေးဖြစ်သွားတယ်။ စားရတာ လွယ်သလို၊ ရေးရတာလဲ လွယ်တယ်။ အရသာရှိတဲ့ စာပေတွေ။
မနေ့ က စားဖြစ်တဲ့ နေ့ လယ်စာ။
တကယ်ဆို မနေ့နေ့ လယ်က ထမင်းစားဖို့စိတ်မပါခဲ့ဘူး။ ထမင်းစား မဆင်းပဲ နေမလို့ ၊ အလုပ်လူတွေက ဘယ်သူနဲ့ မှ ချိန်းထားတာ မရှိရင် သူတို့ နဲ့အတူ လိုက်စားဆိုတာနဲ့စားဖြစ်သွားတယ်။ အစားအသောက်ရွေးတဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းသိနေတော့ ဘာစားချင်လည်း မေးရှာပါတယ်။သွားချင်တာသွား၊ စားချင်တာစား ဖြစ်တယ် ပြောလိုက်တော့ အဲဒီ ဆိုင်ကို သွားဖြစ်တယ်။ ဆိုင်နာမည်က "Rabbit Brand Seafood Delicacies"။
ကျွန်မ အတွက်တော့ ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ဖူးခြင်းပဲ။ မဆိုးဘူး။ အစားအသောက်တွေက စားရတာ အဆင်ပြေတယ်။ အဲဒီမှာ ရတာတွေက Set Meal တွေ။ အစားအသောက်နဲ့ အတူ Drink + Dessert ပါပြီးသား။ အစားအသောက် စားပြီး တစ်ခုခုသောက်လေ့ရှိတဲ့ သူတွေအဖို့အဆင်ပြေတယ်။
Set Meal အပြည့်အစုံ။ S$ 5.50 ပေးရတယ်။
no0dle + white fugus dessert + soup + chinese tea
ဒီနားက Food Court တွေမှာ S$3-4 နဲ့စားဖို့တစ်ခုခု ရနေတာ ထက်စာရင်တော့ နည်းနည်းများတယ် ပြောကြမလား။ Food Court မှာတော့ သောက်ဖို့ ဟာမပါတော့ ထပ်ဝယ်သောက်ရမှာပေါ့။ အလုပ်နားမှာ အဲလို ဆိုင်လေးတွေ အတော်များများ ရှိတယ်။ အခုဆိုင်က သူလို တခြားဆိုင်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆို ဈေးသက်သာတယ် တောင်ပြောလို့ရမယ်။ အဲလ်ိုဆိုင်တွေမှာ စားရင် အဓိက`ကောင်းတဲ့ အချက်က အစားအသောက် အရသာတွေ။ Food Court မှာ စားရင် ကြုံနေကြ အမြဲတစ်မျိုးထဲ ဖြစ်နေတဲ့ အရသာတွေနဲ့ကွဲထွက်နေတယ်။ အပြင်မှာပဲ စားလေ့ရှိတဲ့သူတွေ အတွက် ကောင်းတယ်။
ရေနွေးကို ဘီယာခွက်နဲ့ထည့်သောက်တာ။ မနေ့ က ထမင်းစားပြီး ရေနွေး ၂ ခွက်လောက်သောက် ဖြစ်တယ်။ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ပန်းကန်သေးသေးလေးမှာ ထည့်ထားတဲ့ ငါးခြောက်ကြော်လို ဟာတွေက ကိုယ့်ဘာသာ ယူရတာယ်။ တစ်ခါထည့် မဟုတ်ဘူး၊ ကြိုက်သလောက် ထပ်ယူလို့ ရတယ်။ ရန်ကုန်က ငါးခြောက်ထောင်းကြော်လို ပဲ စပ်စပ်လေးနဲ့ စားလို့ ကောင်းတယ်။
Contact : 65570874
#02-114 Lucky Plaza
Contact : 67379722
WebSite : rabbitbrand.com.sg
Google ကြည့်တော့ Lucky Plaza မှာလည်း ဆိုင်ခွဲရှိတယ် သိရတယ်။ WebSite လည်းရှိတယ်။ ဘယ်ဈေးကြည့်လည်း ဘာတွေရလဲဆိုတာ စပ်စုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Menu ကြည့်ပြီးကြည့်တယ်ဆို သွားစာပေါ့နော်။
ဒါကတော့ တခြားတစ်ယောက် စားတဲ့ ဟင်း။
Posted by Nay Nay Naing at 3/18/2009 12:51:00 PM7comments
Posted by Nay Nay Naing at 3/17/2009 10:26:00 AM7comments
The forgiveness is the attribute of the strong.
Posted by Nay Nay Naing at 3/16/2009 03:55:00 PM2comments
♦ Cartoons : IT Security Awareness - Ghost Writer!
ကိုယ့် အီးမေးရဲ့ Password တခြားသူ သိလည်း အရေးအကြီးဘူး၊ ကိစ္စမရှိဘူး ဆိုသူများသို့ ...
အလုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အီးမေးမို့Boss အကြောင်း ခေါင်းစဉ်တပ် ပို့ တာ ထင်ပါတယ်။ တခြား ကိုယ်ပိုင်အီးမေးသာ ဆိုရင်.. ဘယ်သူတွေစီ ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေ ပို့ မလဲ မသိဘူး...
Posted by Nay Nay Naing at 3/16/2009 11:30:00 AM6comments
အချစ်မရှိရင် ဘ၀အဓိပ္ပါယ် မရှိတော့ပါ
နှလုံးသား ချစ်ပန်းကလေးတွေ ဖူးပွင့်လာ..
တို့ နှစ်ယောက်ချစ်တာ အပြစ်လား...
ပျော်စရာတွေငိုစရာတွေ တွေ့ ချိန်မှာ
ရွှေပင်လယ် ငွေပင်လယ်တွေ ဆီးကာခါ
ခရီးဆက်မယ် အချစ်အတွက်ဆို ရဲဝံ့စွာ
အေးချမ်းတဲ့အရိပ်လေးတစ်ခု တို့ အတွက်ပေးပါ
မတူညီတဲ့အလွှာခြားပါစေ ... ချစ်တာအပြစ်လား..
အဆင်ပြေရာဘ၀ခြင်းတွေ ... ချစ်တာအပြစ်လား
ပျော်စရာရှာလူသားတွေ ခံစားကာ ... ချစ်တာအပြစ်လား
အတောင်စုံရင် ဝေဟင်ကို အပြေးပျံကာ..
အချစ်ငှက်တို့သဘာဝနဲ့ အလှအပတရားကို
ကြင်ကြင်နာနာစိတ်များနဲ့လူသားတွေကြားထဲမှာ..
တို့ နှစ်ယောက်ချစ်တာ အပြစ်လား..
ချစ်တာအပြစ်လား - ကိုင်ဇာ ၊ ရတနာမိုင်
ချစ်တာအပြစ်လား - မေခလာ ၊ ဇော်ပိုင်
ချစ်တာအပြစ်လား - မေဆွိ (Credit to GreenGirl)
Posted by Nay Nay Naing at 3/14/2009 11:03:00 PM 11 comments
လက်သီးဆုပ်မလား၊ လက်ဝါးဖြန့် မလား..
လက်သီးဆုပ်မလား လက်ဝါးဖြန့် မလား..
မြင်းကောင်းခွာလိပ်၊ ပန်းကောင်းအညွန့် ကျိုး
ဘေးမလာခင် ပြေးတွေ့ မယ့်အကောင်
အတွင်းစိတ်နောက်ချေး အပြုံးနဲ့ ရွေှ့ချ
လုပ်ရဲရင်ခံရဲ စိတ်မျိုးနဲ့ နေပေါ့ ရှုံးရင်လည်း
Posted by Nay Nay Naing at 3/14/2009 12:55:00 PM6comments
Posted by Nay Nay Naing at 3/13/2009 11:14:00 PM 16 comments
Posted by Nay Nay Naing at 3/12/2009 04:02:00 PM 22 comments
ဒီနေ့နေ့ လယ်စာ ဟိုတရုတ်ဆိုင်မှာ ထမင်းသွားစားဖြစ်တယ်။ အဲဒီဆိုင် မရောက်တာတောင် အတော်ကြာပြီ။ အလုပ်က လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၂ ယောက်က သူတို့ထမင်းဘူး ယူမလာဘူး၊ နေ့ လယ်စာ အတူသွား စားရအောင် ပြောလာတာနဲ့တရုတ်၊ ဖိလစ်ပီနိုး နဲ့ဗမာ အားလုံး စားနိုင်မယ့် အဲဒီဆိုင်ကို သွားစား ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ လယ် မိုးလည်း မရွာဘူးလေ။ အရင်မှာလေ့ ရှိတာထဲက မဟုတ်ပဲ ဟင်းအသစ်တွေ စားဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ကျွန်မရဲ့ Food Menu ကို Update လုပ်ဖို့ ဖြစ်လာပြီပေါ့။
ဒါလေးက ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေး သုတ်ထားတာ။ ကြော်ထားတာတုန်းကလည်း စားလို့ ကောင်းသလို အခုလို သုတ်ထားတာလည်း စားကောင်းတယ်။ စပ်စပ်လေးဆိုတော့ မိုးအေးအေး အချိန်မှာ စားလိုက်ရတော့ ပိုပြီး ခံတွင်းမိန်သွားတယ်။
ဒါကတော့ ခရမ်းသီးနဲ့အားလူး။ ဒါလည်းစားလို့ ကောင်းပါတယ်။
ဒီအောက်က ပုံကတော့ ကြက်သား။ စားလို့ လုံးဝ မကောင်းဘူး။ ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်းမှ မဟုတ်ဘူး။ တခြား ၂ ယောက် လည်း မကောင်းဘူးဆိုတာ ထောက်ခံတယ်။ နောက်ဘယ်တော့မှ ဒီဟင်းကို မှာ မစားတော့ဘူးလို့၃ ဦးသဘောတူ ဆုံးဖြတ် လိုက်ကြတယ်။
သီချင်းတွေ နားထောင်မယ်၊ ကာတွန်းတွေ ဖတ်မယ်... အဲ.. ပြီးတော့ အစားအသောက် ကောင်းကောင်းလေးတွေ လျှောက်စားလိုက်နဲ့ဘ၀ကြီးက ငြိ်မ်းချမ်းနေ လိုက်တာ။
ဒါနဲ့လူတစ်ယောက်က အခက်အခဲတွေ အကြောင်းမပြောတိုင်း ဒီလူမှာ အခက်အခဲ မရှိဘူးလို့ယူဆလို့မရနိုင်ပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်တဲ့ ပုံစံခြင်းမှ မတူကြတာ။ လူတိုင်းရဲ့ ဘ၀မှာ အခက်အခဲဆိုတာ ရှိတာကြီးပဲ။ ဘ၀ကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင် မလဲ။ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်သလဲ။ ဘာပဲဖြစ်နေနေ... ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်က အေးချမ်းနေပြီး၊ ကိုယ်ရဲ့ ခန္စာမှာလည်း အားအင်အပြည့်ရှိနေမှသာ ဘ၀မှ ကြုံတွေ့ ရတဲ့ ဆိုးမှု့ ကောင်းမှု့ မှန်သမျှကို ဖြတ်သန်းကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာတွေကို ရရှိနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။ လူဘ၀ကြီးက တိုတိုလေးပါ။ လိုချင်တာတွေ ရအောင် ကြိုးစားပါ။ ဒါပေမယ့် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အေးအေးဆေးဆေး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ကြိုးစားကြတာပေါ့။
ဒီအောက်ကတော့ Update လုပ်ထားတဲ့ Menu အသစ်။
♠ Northern Chinese Cuisine
Posted by Nay Nay Naing at 3/11/2009 02:16:00 PM5comments
Don't let your bad breaks
go gettin' you down
You still gotta try
Do it no matter what the people say
Die before you let them stand in your way
Winners or losers you keep rollin' on
So go on and roll the dice
ဒီသီချင်း သီဆိုတဲ့ အဖွဲ့ က Atlanta Rhythm Section (ARS)။ သီချင်းထွက်တာ သိပ်တော့ မကြာသေးပါဘူး။ ပထမအကြိမ် ထွက်တာ 1979 ဆိုတော့ နှစ် ၃၀ လောက်ပဲရှိ ပါသေးတယ်။ 1996 မှာ တစ်ခါ၊ 1997 မှာတစ်ခါ ပြန်ထွက်ခဲ့သေးတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 3/10/2009 10:14:00 AM4comments
ဒီနေ့ က တနင်္လာနေ့ လည်း ဖြစ်ပြန်၊ ရာသီဥတုကလည်း အုံ့ မှိုင်းမှိုင်းကြီးဖြစ်နေတော့ လူက လန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိ ထုံထိုင်းထိုင်းကြီး ဖြစ်နေတယ်။ ခုမှ မနက် ၁၀ နာရီပဲ ရှိသေးတယ်။ အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်ဖို့ ဆို နောက် ၈ နာရီ လိုသေးတယ်။ လန်ဆန်းသွားအောင် ဘာလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ... ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားရင်း သတိရသွားတာနဲ့ .. Randy Glasbergen ရဲ့ ကာတွန်းစာမျက်နှာကို သွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ရီလိုက်ပြုံးလိုက်ပြီး စိတ်ပေါ့ပါးသွားတယ်။
Today Cartoons by Randy Glasbergen
ဒီနေ့အတွက် ကာတွန်းမှာ ပါတဲ့ စာသားက...
အဲဒီက ကာတွန်းတွေဟာ Professional အလုပ်အကိုင် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကာတွန်းတွေပါ။ စီပွါးရေး၊ ကွန်ပြူတာ၊ ဆေးပညာ ... စုံနေတာပဲ။ ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ တကယ့် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အရာတွေကို ကာတွန်း ဆွဲထားတာ။ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို ဖော်ပြတဲ့အခါ ထိထိမိမိလည်း ရှိတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။ ရီလည်း ရီရတယ်။ ကျွန်မတော့ အရမ်းကြိုက်လို့အမြဲသွားသွား ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာရှိတဲ့ တချို့ကြိုက်တဲ့ ကာတွန်း ပုံတွေဖော်ပြချင်ပေမယ့် ကော်ပီရိုက် ရှိတာကြောင့် မဖော်ပြတော့ဘူး။ ကြည့်ချင်တယ်ဆို Online Catalog မှာသွားကြည့်လို့ ရတယ်။ ကာတွန်းတွေက အများကြီးဆိုတော့ အတော်လေး အချိန်ပေးပြီး ကြည့်ရမယ်။ ခေါင်းစဉ်လေးတွေ ခွဲပြီး စုထားပေးတော့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာက စပြီး တဖြည်းဖြည်းခြင်း ကြည့်သင့်တယ်။ ကြိုက်မှာ သေချာပါတယ်။
Online Catalog :
More than 1000 Cartoons
Cartoon Gift Shop :
Café Press Cartoon Gift Shop
Randy Glasbergen ဆိုတာ အမေရိကားမှာ ထင်ရှားတဲ့ ကာတွန်းဆရာ တစ်ဦးပါပဲ။ သူရဲ့ ကာတွန်းတွေကို နာမည်ကြီး စာစောင်တွေ (The Wall Street Journal, Reader's Digest, Harvard Business Review, Cosmopolitan... ) ၊ သတင်းစာတွေ၊ အင်တာနက်ပေါ်က ဆိုဒ်တွေ၊ Seminars၊ Conferences၊ Training materials၊ Mailing lists ... နေရာစုံမှာ အသုံးပြုကြတယ်လို့ သိရတယ်။ တခြားဟာတွေ အသာထား၊ သူတို့ ရဲ့ သဘာဝအရကိုက တတ်ရောက် သူအများစုကို ပျင်းရိအိပ်ငိုက်စေတတ်တဲ့ Seminars၊ Conferences၊ Training လိုတွေမှာတော့ ဒီလိုကာတွန်းတွေ သုံးပေးချင်ဟာ တတ်ရောက်သူတွေကို အာရုံစိုက်မှုကို စွဲဆောင်နိုင်မှာ အမှန်ပဲ။
Randy Glasbergen ရဲ့ တခြားလက်ရာတွေ..
Better Half on King Features by Randy Glasbergen
Posted by Nay Nay Naing at 3/09/2009 11:30:00 AM 11 comments
.... နေရာတကာ လွတ်လပ်ခွင့် ပေးထားလို့လည်း မရ။
.... ဟိန်းလား ဟောက်လား တင်းကျပ်လား၊ ဟိုဟာမလုပ်ရ၊ ဒီဟာမလုပ်ရ ဆိုလို့လည်း မဖြစ်။
တစ်ခါတစ်ရံ မသိလိုက် မသိဖာသာနေရမည်။
Posted by Nay Nay Naing at 3/07/2009 05:55:00 PM6comments
ကျွန်မ အနေနဲ့တခြား Browsers တွေ မသုံးဖူး မဟုတ်ဘူး သုံးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိက အမြဲသုံးဖြစ်တာ Firefox Browser ပါပဲ။ Firefox မှာရှိတဲ့ Add on တွေကြောင့် အဲဒီလို သုံးဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဟိုတခါရေး ဖူးတယ်။ ကွန်ပြူတာမှာ KeyLogger တွေ ရှိနေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ အကြောင်း။ KeyLogger တွေက ကွန်ပြူတာမှာ ကိုယ်ရိုက်ထည့်တဲ့ Key မှန်သမျှကို မှတ်ထားတယ်။ အဲဒီကတစ်ဆင့် တခြားသူတွေက ကိုယ့်ရဲ့ အချက်အလက်၊ password တွေရသွားကြတယ်။ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာဆို တော်သေးတယ်။ KeyLogger ရှိမရှိ အမြဲ စစ်နေလို့ ရတယ်။ Public ကွန်ပြူတာတွေ သွားသုံးလို့အဲဒီကွန်ပြူတာတွေမှာ KeyLogger ရှိမရှိက ကိုယ်က မသိနိုင်ဘူး။ သိအောင်စစ်နေဖို့ လဲ အချိန်က မရ။ ဒီလိုအခါတွေမှာ Firefox Addon တစ်ခုဖြစ်တဲ့ KeyScrambler ကိုသွင်းပြီး သုံးလို့ ရတယ်။
KeyScrambler က Keyboard က ကျွန်မတို့ ရိုက်ထဲလိုက်တဲ့ စာလုံးတွေကို Kernel Driver Level မှာ encrypt လုပ်ပေးတယ်။ Firefox Browser ကို ရောက်မှာသာ decript ပြန်ပြီး လုပ်ယူပါတယ်။ Keylocker တွေ အလုပ်လုပ်ပုံက ကျွန်မတို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ စာလုံးတွေ Keyboard ကနေ Operation System ကို အသွားမှာ မှတ်ယူ သိမ်းထား လိုက်တာ။ ဒီတော့ KeyScrambler သုံးမယ်ဆိုရင် စက်ထဲမှာ KeyLogger ရှိနေတယ် ဆိုလည်း ကျွန်မတို့ ရိုက်ထည့်လိုက်တာတွေကို မရတော့ပဲ KeyScrambler က encrypt လုပ်ထားတာတွေကိုပဲ ဖမ်းယူရသွားပါ လိမ့်မယ်။ အတော်လေး အသုံးဝင်ပါတယ်။
စမ်းသုံးချင်တယ်ဆို Firefox Addon: KeyScrambler မှာ သွားယူ သွင်းလို့ ရပါတယ်။ KeyScrambler က ယူဆာတွေရဲ့ စစ်တမ်းအရဆို ကြယ်လေးပွင့် ရထားပါတယ်။
တစ်ခုရှိတယ်။ Website မှာရေးထားတဲ့ ကွန်မန့် တွေအရ Game ကစားတဲ့သူတွေ တချို့ မှာ ပြဿနာ ရှိတယ် သိရတယ်။ ကျွန်မကတွက်တော့ ဘာမှ ပြဿနာမရှိ အဆင်ပြေပါတယ်။ စမ်းသွင်း သုံးကြည့်ပြီး မကြိုက်လို့ပြန်ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင် Firefox Browser မှာ တင်မကဘူး၊ Programs မှာပါ ဖျက်ရပါမယ်။
Other post to read :
ကျွန်တော် နှစ်သက်သော Firefox Add-ons များ by ဖူးနုသစ် (ZT)
Posted by Nay Nay Naing at 3/07/2009 10:51:00 AM3comments
ဒီနေ့ညစာ။ ထမင်း မစားဘူး။ ခုနောက်ပိုင်း ညစာဆို ထမင်းမစား ဖြစ်တာများတယ်။ ၀ိတ်ချတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ချစရာ ပိုနေတဲ့ အလေးချိန်လည်း မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း အကျင့်ဖြစ်အောင် ညစာ လျှော့စားတယ်။ ဗိုက် အရမ်းဆာတဲ့ နေ့ တွေ လောက်၊ တစ်ပတ် ၃ ရက်လောက်ပဲ ညစာကို ထမင်းစား ဖြစ်တယ်။ မနက်စာကို နေ့ စဉ် မနက်တိုင်း စားဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး၊ နေ့ လယ်စာများများ စားတဲ့ အကျင့်လုပ်တယ်။
ဒီနေ့ အတွက် ညစာအဖြစ် နန်းကြီးသုပ် စားဖြစ်တယ်။ ကောင်းလားဆို မဆိုးပါဘူး။ ရန်ကုန်ကလောက်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ ပုံမှာတွေ့ တဲ့ အတိုင်း အသား သိပ်မပါဘူး။ ဟင်းအနှစ်လည်း သိပ်မပါဘူး။ အနှစ်မကြိုက်တဲ့ ကျွန်မ အတွက်တော့ အတော်ပဲ။ အအေးက Coke မသောက်ပဲ Ice Lemon Tea သောက်ဖြစ်တယ်။ ညနေပိုင်းဆိုတော့ Coke မသောက်တာ ကောင်းတယ်လေ။
ဒါနဲ့နန်းကြီးသုပ်က ကျွန်မ ငယ်ငယ်က မစားတဲ့ အစားအသောက်ထဲ မှာပါတယ်။ ပုံစံကြည့်ပြီး မစားတာ။ စားချင်စရာမရှိလို့ဆိုပြီး မစားဘူး။ ကျွန်မတို့ အိမ်နားမနီးမဝေးမှာ နန်းကြီးသုပ် နာမည်ကြီးဆိုင် ရှိတယ်။ အဖေက အရမ်းကြိုက်တော့ သွားသွား စားဖြစ်တယ်။ တစ်အိမ်လုံးနဲ့တစ်ယောက်၊ ကျွန်မ ဆိုင်ကို လိုက်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် မစားဘူး။ ဒါပဲကျွေးမှ တခြားဟာ မရှိဘူးဆိုတောင် အဆာပဲခံမယ်၊ မစားဘူးဆို လုပ် တတ်တာ။ အိမ်က အတင်းကျွေးရင် စားပြီး ခေါင်းတွေ မူးနေရော။ ငယ်ငယ်က ခေါက်ဆွဲ စားရင် ခေါင်းမူးတတ်တဲ့ အကျင့်လည်း ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ ငယ်ငယ်က ခေါက်ဆွဲကြော် မစားဘူး၊ ကြာဇံကြော်၊ ထမင်းကြော်ပဲ စားတယ်။ နိုင်ငံခြားရောက်မှ နည်းနည်းခြင်း စားနိုင်အောင် လုပ်ယူ ရတယ်။ အခုတော့ တိုးတတ်လာ ပါပြီ။
မှတ်မှတ်ရရဆို ဒန်ပေါက်လိုပဲ နန်းကြီးသုပ် ကို နိုင်ငံခြားရောက်ပြီး မြန်မာပြည် အလည်ပြန်တဲ့ အချိန်ကမှ စပြီး စားမယ်ဆို စားကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာ။ ကြိုက်လားဆို အရမ်း မကြိုက်ဘူး။ စားလို့ တော့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုအချိန်အထိ ခေါင်းနည်းနည်း မူးနေတဲ့ အချိန်၊ လူက နုံးနေတဲ့ အချိန်တွေဆို နန်းကြီးသုပ် စားလို့မရသေးဘူး။
ဒီနေ့ စားတဲ့ နန်းကြီးသုပ် က S$3ပေးရတယ်။ မုန့် ဟင်းခါး ဟင်းရည်ပေးတယ်။ ကျွန်မ စိတ်ထဲ ဟင်းရည်က နည်းနည်း ငံသလိုပဲ။ ဈေးတန်လား မတန်လားဆို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘာမှ မလုပ်စားဖြစ်တဲ့ ကျွန်မ အတွက်တော့ ဒါ တန်တယ်ပြောရမယ်။
Other Related Post : နန်းကြီးသုပ်၊ နန်းပြားသုပ်၊ လက်ဖက်ရည်
Posted by Nay Nay Naing at 3/06/2009 10:30:00 PM 8 comments
Lady Fingers ဆိုလို့ကောင်မလေးတွေရဲ့ လက်ချောင်းတွေအကြောင်း ရေးမယ် မထင်ပါနဲ့ ။ ရုံးပတေသီး (Okra) အကြောင်း ရေးမလို့ ပါ။ Okra ဆိုလို့လည်း မြန်မာပြည်က "မ" သီချင်းနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ အဖွဲ့ အကြောင်းရေးမှာလို့ လည်း မထင် ကြပါနဲ့ ။ စားတဲ့၊ ဟင်းချက်စားတဲ့ ရုံးပတီသီး အကြောင်း ရေးမှာပါ။ ရုံးပတီသီးကို Okra လို့ လည်း ခေါ်တယ်၊ Lady Fingers လို့ လည်း ခေါ်တယ်၊ Gumbo လို့ လည်း ခေါ်ကြသေးတယ်။
မစားချင်ဘူးဆိုပြီး လုံးဝ မစားဘူး။ အမေခွံ့ ကျွေးတောင် မစားဘူး။ ငယ်ငယ်က အဲလိုပဲ။ မလုပ်ဘူး၊ မစားဘူးဆိုလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ အရာတွေကို ဘာအကြောင်းကြောင်းနဲ့ မှ မစားဘူး၊ မလုပ်ဘူး။ ခုတော့ အဲဒီအကျင့် သိပ်မရှိတော့ဘူး။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ လိုက်လျောညီထွေနေမှ ဆိုပြီး အဲလိုအကျင့်တွေ ဖျောက်ဖို့ကြိုးစားရတယ်။ ထားပါ။ ကျွန်မကသာ မစားတာ၊ အမေက ရုံးပတီသီး ကြိုက်တယ်။ ကြော်စားလေ့ ရှိတယ်။ အဖေက ချဉ်ပေါင်းဟင်း ကြိုက်တယ်။ အိမ်မှာက ချဉ်ပေါင်ဟင်းချက်ရင် မျှစ်၊ ခရမ်းသီးနဲ့ရုံးပတီသီး ထည့်လေ့ ရှိတယ်လေ။ ဒီတော့ ဈေးသွားတဲ့ အခါတွေမှာ အသီးအရွက် ၀ယ်တိုင်းနီးပါး ရုံးပတီသီးလည်း ၀ယ်ရတာ များတယ်။ တခါတလေ အိမ်မှာ အကိုဝမ်းကွဲတွေလာနေတဲ့ အချိန်ဆို အပင်တောင် စိုက်ထားသေးတယ်။ ကျွန်မ မျက်စိထဲတော့ ရုံးပတီသီးအပွင့်က ချဉ်ပေါင်ပွင့်နဲ့ဆင်ဆင် တူတယ်။
မှတ်မိသေးတယ်။ ရုံးပတီသီး ရွေးရင် အဖျားကို လက်နဲ့မသိမသာလေး ချိုးကြည့်လိုက်။ ကျိုးတယ် ဆိုနုတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက မှတ်ထားတာ။ အဲလိုလုပ်ရင် ဈေးသည်က မျက်စောင်းထိုးတယ်။ ရင့်လို့ မကျိုးပဲ အမျှောင်းလိုက် ကွဲသွားရင် တခြားဝယ်တဲ့သူတွေလည်း မယူတော့ဘူးလေ။ နောက်ပိုင်း aဈးဝယ်သက် ရင့်လာတော့ ရုံးပတီသီး အဖျားကို ကျိုးအောင် ချိုးကြည့်ဖို့ မလိုတော့ဘူး။ လက်နဲ့ မသိမသာလေး ထိုးကြည့်ပြီး ရင့်လား၊ နုလား သိနိုင်တယ်။ နောက်တစ်နည်းက အရောင်အနုအရင့် နဲ့ ခွဲတာ။ အကြမ်းဖျင်းတော့ နည်းနည်း သွယ်သွယ်ရှည်ရှည်လေးဖြစ်နေပြီး အရောင်ရင့်နေတယ်ဆို မယူဘူး။ ဒါက တခါတလေ အလုပ် မဖြစ်ဘူး။ ရုံးပတီသီးက အမျိုးအစားကွဲတွေ ရှိတယ်လေ။ နည်းနည်းသွယ်ပြီး အရောင်နုတာ၊ နည်းနည်းပုပြီး အရောင်ရင့်တာ။ ဒီတော့ အရောင်ရင့်တိုင်း ရင့်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ မရပြန်ဘူး။ ချိုးကြည့်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။ ပလတ်စတစ်အိပ်နဲ့ ထုတ် ရောင်းတာ ဆိုရင်တော့ အဲလိုလုပ်ကြည့်လို့ မရဘူးပေါ့။
ပုံမှန်ဆို အသီးအရွက်တွေကို မလှီးခင်တခါနဲ့လှီးပြီးတခါ ရေဆေးလေ့ရှိတယ်။ လှီးပြီးမှ ဆေးလို့အဟာရတွေ လျော့သွားမယ်ဆိုလည်း မတတ်နိုင်ဘူး၊ သန့် ရှင်းဖို့ လိုတယ်ဆို ဆေးတာပဲ။ ရုံးပတီသီးကို ကြတော့ ချက်ဖို့ ပြင်တဲ့အခါဆို မလှီးခင် တခါတည်း သန့် စင်အောင် (ဒီကိုလာကို ပြောခြင်းမဟုတ်) ဆေးရတယ်။ လှီးပြီးမှ ရေဆေးတယ်ဆို အချွဲတွေ ထွက်လာရော။ ဆော့ချင်တယ်ဆို ဆီလုပ်တန်း ဆော့လို့ တော့ ရတာပေါ့လေ။ မသိခင်ကဆို လှီးပြီး ရေးတခါထပ်ဆေးတော့ အချွဲတွေ ထွက်၊ တခြား အသီးတွေလို အစေးထွက်တာလားဆို အချွဲတွေ ပြောင်အောင်ဆို ရေးထပ်ဆေး၊ ရေဆေးလေ ပိုထွက်လေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခပ် သွားတာပဲ။ နောက်မှ မေမေ ပြောပြလို့ မှတ်ထားလိုက်တယ်။
ရုံးပတီသီး အကြောင်း နည်းနည်း လေ့လာကြည့်တဲ့ အခါ ရုံးပတီသီး ရဲ့ အစက အာဖရိက ကလို့သိရတယ်။ ခုတော့ နေရာတကာ တကမ္ဘာလုံး စားနေကြတာပဲ။ အိန္ဒိယမှာ အစားများတယ်။ အစိမ်းရောင်တင်မကဘူး၊ အနီရောင်လည်း ရှိတယ်လို့သိလိုက်ရတယ်။ အနီရောင် ရုံးပတီသီး အပြင်မှာ တခါမှ မမြင်ဖူးဘူး။
ရုံးပတီသီးစားတာ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတယ်။ ပြောကြတာပဲ။ ဗိုက်တာမင် အေနဲ့စီပါတယ် သိရတယ်။ မိန်းကလေးတွေ အတွက် သင့်တော်တယ်လည်း ပြောကြတယ်။ အသားအရည် လှတယ်တဲ့။ နောက်ပြီး ရုံးပတီသီးမှာ fiber ပါတာများတဲ့အတွက် ၊ ပိန်အောင်လုပ်တဲ့ အချိန်တွေမှာလည်း ရုံးပတေသီး စားကြတယ် လို့သိရတယ်။ ၀ိတ်လျှော့ချင်တဲ့သူတွေ စားသင့်တယ်ပေါ့။ နောက်တစ်ခုက မနက်ပိုင်း ရုံးပတေသီးကို လှီးထားတာကို ရေစိမ်သောက်မယ်ဆို ဘာရောဂါ ပျောက်တယ် ဆိုလား။ ဒါကတော့ အတိအကျ မသိလို့မရေးတော့ဘူး။ အိန္ဒိယက ဆေးမှီးတို နည်းလား မသိဘူး။ ရုံးပတီသီး ရေစိမ်သောက်တဲ့ အကြောင်းသိချင်ရင် အင်တာနက်ပေါ် လိုက်ရှာဖတ်ကြည့်လို့ ရတယ်။
ထူးထူးခြားခြားသိလိုက်ရတာက ရုံးပတီသီး အစေ့ကို ကော်ဖီစေ့အစား သုံးကြတယ်ဆိုတာပဲ။ ကာဖင်း ရှောင်ချင်သူတွေ အတွက်။ အရင်က တခါမှ မသိခဲ့ဘူး။ ကျွန်မကလည်း ကော်ဖီမှ မကြိုက်တယ်။ ကောင်းမကောင်းလည်း မသိဘူး။ မသောက်ဖူးဘူး။ ဖတ်မိသလောက်တော့ WWII မှာလည်း ကော်ဖီစေ့ကို ရုံးပတီသီး စေ့နဲ့ အစားထိုး သုံးခဲ့ကြတယ် သိရတယ်။ အဲဒီ အကြောင်း စိတ်ဝင်စားလို့သိချင်တယ်ဆို Google : Okra Seeds as Coffee အားကိုး ကြည့်လိုက်ပါ။
ဒီနေ့အမေ့ကို သတိရတဲ့ စိတ်နဲ့ထမင်းစားတာမှာ ရုံးပတီသီး ကြော်ချက်မှာ စားဖြစ်တယ်။ စားနေရင်း ရုံးပတီသီး အကြောင်း ရေးဖို့စိတ်ကူးပေါ်ခဲ့တာနဲ့ခုလို သိတာလေးတွေ ချရေးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဟိုတလောက ရနံ့ သစ်မှာ ထမင်းစားတုန်းတော့ ရုံးပတီသီး တို့ စရာ ချပေးထားတာတွေ့ လို့ နည်းနည်း ယူစားကြည့် ဖြစ်တယ်။ ဟင်းအနေနဲ့ တော့ ဒီနေ့ စားတာဟာ ပထမဆုံး စားဖြစ်ခြင်းပါပဲ။ ကြိုက်လားဆို အဲဒီလောက်ကြီး မကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် စားလို့ တော့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အခွင့်သင့်တဲ့ အခါတွေမှာလည်း ရုံးပတီသီး စား ဖြစ်တော့မယ် ထင်ပါတယ်။ အမေကိုလည်း ပြောပြရအုံးမယ်။
Other Related Post : Citrus Fruits
Posted by Nay Nay Naing at 3/06/2009 04:14:00 PM9comments
Do you needashoulder to cry on or an understanding ear to listen to you?
မနေ့ ညနေက အင်တာနက်ပေါ်လျှောက်ကြည့်ရင်း CMS ရဲ့ delicious bookmarks ကတစ်ဆင့် ဒီသီချင်းကို နားထောင်ဖြစ် သွားတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 3/06/2009 10:46:00 AM3comments